केवल 65 XNUMX यूरोका लागि एम्स्टर्डममा उड्नुहोस् - यो महान प्रस्ताव पत्ता लगाउनुहोस्! | यात्रा समाचार
एम्स्टर्डम १२ औं शताब्दीको माछा मार्ने गाउँ भएर गयो नेदरल्याण्ड को राजधानी हुन। एक बैठक स्थल जहाँ संस्कृति र मनोरन्जन मिक्स पर्यटकहरु को विकल्प को एक विस्तृत विविधता प्रदान गर्न। त्यसोभए, यदि तपाईं उनलाई भेट्ने अवसर लिन चाहनुहुन्छ भने, यो तपाईंको उत्कृष्ट क्षण हो।
अब तपाई एउटा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ धेरै अपर्याप्त प्रस्ताव कस्तो छ। एम्स्टर्डममा तपाईको धेरैजसो बस्नेमा यो एक हप्ता हुनेछ। किनभने यो लामो समय देखिन्छ भने पनि, एक पटक त्यहाँ तपाईं कसरी यो छोटो हुन्छ कसरी देख्नुहुनेछ। नयाँ getaway को साथ दिनचर्यामा फर्कन सुरु गर्नुहोस्!
1 Ms 65 यूरोका लागि एम्स्टर्डममा उडान गर्नुहोस्
2 एम्स्टर्डममा सात दिनको लागि होटल
3 एम्स्टर्डममा के हेर्ने
3.1 तपाईंको च्यानलहरू
3.2 तैरिएका घरहरू
3.3 कफी पसलहरू
3.4 रातो बत्ती जिल्ला
3.5 एम्स्टर्डम वर्ग
Ms 65 यूरोका लागि एम्स्टर्डममा उडान गर्नुहोस्
सेप्टेम्बर नियमित को तथाकथित फिर्ता मानिन्छ। यद्यपि त्यहाँ धेरै भन्दा धेरै व्यक्ति छन् जुन यस महिनामा केहि दिन लिन सक्दछन्। त्यसोभए, यदि यो तपाईंको मामला हो भने, तपाईंसँग नयाँ अपोइन्टमेन्ट पहिले नै छ ता कि छुट्टी पछिको उदासीनता यस बर्षमा अवस्थित छैन। हामीले तपाईंको लागि चयन गरेका छौं केवल 65 XNUMX यूरोका लागि उत्तम उडान भन्दा बढी.
अवश्य पनि, यो बिलबाओबाट र बाहिर जान्छ यो एम्स्टर्डमको लागि सिधा उडान हो। यसको प्रस्थान मंगलबार सेप्टेम्बर १ 18 र फिर्ती, मंगलबार २ 25 मा हुनेछ। मात्र दुई घण्टामा तपाईं गन्तव्यको देशमा यसको सबै प्रस्तावको आनन्द लिन सक्षम हुनुहुनेछ। यस अवस्थामा तपाईले एक हात सामान लिन सक्नुहुन्छ र तपाईंले उडान गर्ने कम्पनी 'भ्युएलिंग' हुनेछ। के तपाइँ यसलाई याद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ? त्यसोभए, जति सक्दो चाँडो यसलाई बुक गर्नुहोस् अन्तिम समय.
एम्स्टर्डममा सात दिनको लागि होटल
एकदम कम मूल्यमा होटलहरू भेट्टाउनु धेरै सजिलो छैन। तर यो हुनु पर्छ यो एक हप्ता को बारे मा हो र हामी तपाइँ को लागी यो प्रस्ताव छान्नु पर्छ। यो एउटा Star तारे होटल, जसको लागि तपाईं 500०० यूरो तिर्नुहुनेछ। हो, हुनसक्छ यो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, तर तार्किक रूपमा यो छ रातको छ। योसँग नि: शुल्क पार्कि and र Wi-Fi पनि छ। यो 'ताल होटल एम्स्टर्डम एयरपोर्ट' हो। यो केन्द्रबाट7किलोमिटर र एयरपोर्टबाट kilometers किलोमिटर टाढा छ। क्षेत्र तपाइँले यसलाई पाउनुहुनेछ Badhoevedorp मा हुनेछ। यदि तपाईं एक नजर हेर्नुहोस् र आफ्नो आरक्षण बनाउँन चाहानुहुन्छ भने, प्रस्ताव हराउनु अघि, तपाईं यसलाई आरामबाट गर्न सक्नुहुनेछ Expedia.
एम्स्टर्डममा के हेर्ने
साथै हामीले सुरुमा टिप्पणी गरेका छौं। यस ठाउँको भ्रमण धेरै लामो यात्रा गर्नेछ। यससँग कुनाहरू छन् जसले यसलाई जादुई र अद्वितीय बनाउँदछ। थप रूपमा, यदि हामी एक हप्ताको लागि बस्दैछौं भने, हामी ती सबैको रमाइलो गर्न सक्दछौं र पाइपलाइनमा केही पनि छोड्नेछैनौं।
हरेक पाइलामा तपाईं भेट्नुहुनेछ एम्स्टर्डम नहरहरू। उनीहरू बिना शहर सहर प्रायः त्यस्तै हुने थिएन। यसैले त्यहाँ धेरै छन् जो यसलाई उत्तरको भेनिस भन्छन्। यो भन्न सकिन्छ कि जम्मा १००० वटा पुल छन्। तपाईं यस क्षेत्र वरिपरि डु boat्गा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ र मुख्य भूमिबाट तिनीहरूलाई रमाउन सक्नुहुन्छ।
यस जस्तो स्थानको केहि विशेषता पनि। पहिलो क्षणमा ती घरहरू कब्जा गर्ने हिप्पीहरू थिए। भनिन्छ कि तिनीहरू नियमित घर जत्तिकै महँगो हुँदैनन्, तर सत्य यो हो कि तिनीहरूको रखरखाव अझ महँगो हुनेछ। प्रत्येक चार बर्षमा उनीहरुलाई ठूलो निरीक्षणको आवश्यक हुन्छ सबै कुरा राम्ररी चलिरहेको छ भन्ने निश्चित गर्न। तर हामी ती बाहिरबाट हेर्छौं, जसले विशेष पर्यटक चासो पनि उत्पन्न गर्दछ।
एम्स्टर्डममा एउटा क्षेत्र छ जहाँ हामी तथाकथित फेला पार्न सक्छौं 'कफि पसल'। त्यहाँ, तिनीहरू प्राय: रक्सी बेच्दैनन् तर तपाईं विभिन्न पदार्थहरू धूम्रपान गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो एक विरोधाभास जस्तो देखिन्छ, त्यसैले किन यो स्थानहरू यति प्रसिद्ध छन्। तीनिहरुमा तपाईले अत्यधिक माग गरिएको क्यानाबिस कपककेक्स पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ।
रातो बत्ती जिल्ला
यो सँधै एक भएको छ धेरै भेटिएका क्षेत्रहरू। तपाईंले यसलाई सजीलै फेला पार्नुहुनेछ र तपाईं पसल विन्डो भागमा यसको नियन बत्तीहरूले समात्नुहुनेछ। वेश्यावृत्ति यस जस्तो क्षेत्रको नायक हो, जहाँ यो शप विन्डोमा प्रदर्शित हुन्छ।
तपाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वर्गहरू मध्ये कुनैमा जान सक्नुहुन्छ जस्तै बाँध वा स्पुइ जुन तपाईंलाई मद्दत गर्दछ कुनै हतार नगरी तपाईको बसाई रमाईलो गर्न, Leidseplein जुन विपरित हो। पछिबाट तपाईंले फेसन स्टोर र सडक शो दुबै फेला पार्नुहुनेछ।
साथै, तपाईं बिर्सनुहुन्न भ्यान गो संग्रहालय वा रिजक्समुसेमजुन सुनौलो युगका महत्वपूर्ण कार्यहरू समावेश गर्दछ। विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा एनी फ्रान्क घर हो, माछा मार्ने गाउँ भोलेन्डम वा अन्तर्क्रियात्मक प्रदर्शनी 'हेनेकेन अनुभव'। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, सबै स्वाद को लागी एक विस्तृत प्रस्ताव!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » सामान्य » बोलपत्र » केवल 65 XNUMX यूरोको लागि एम्स्टर्डममा उड्नुहोस्